Kenya oo nasiib darro ku tilmaamtay dacwad ay Somalia ka gudbisay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xukuumadda Kenya ayaa sheegtay inay si dhaqso ah markale wadahadal ugala furayso dowladda Soomaaliya, kadib markii Soomaaliya dacwad ka dhan ah Kenya u gudbisay maxkamadda Caalamiga ah ee cadaaladda (ICJ), iyadoo arrintaasi ka dhalatay Kenya oo sheegatay qeyb ka mid ah badda Soomaaliya.
Wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya, Aamina Maxamed ayaa wargeyska Daily Nation u sheegtay inay socdaan dadaallo lagu kulan siinayo madaxweynayaasha Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud iyo dhiggiisa Kenya, Uhuru Kenyatta si ay uga wada-hadlaan murankan badda ee labada dal u dhexeeya.
“Kenya iyo Somalia waxaa u socday wadahadal, balse waxaa nasiib-darro ah in dowladda Soomaaliya ay xirto wadahadalka ayna u gudbiso maxkamad caalami ah dacwad arrintan la xiriirta,” ayay Aamin tiri.
Dowladda Soomaaliya ayaa horraantii bishan dacwad ku saabsan muranka badda ee kala dhexeeya Kenya u gudbisay maxkamadda ICJ, si ay go’aan uga gaarto, iyadoo madaxda Soomaaliya ay sheegeen in lagu daalay in lagu dhameeyo murankan si hoose.
Wasiiradda arrimaha dibadda ee Kenya, Aamina Maxamed ayaa sheegtay in kulanka dhexmaraya madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya uu ka dhici doono magaalada New York ee dalka Mareykanka dhammaadka bishan aynu ku jirto, kaddib shirka guud ee Qaramada Midoobay.
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle oo wareysi VOA ayaa sheegay in shirar badan oo dhex maray iyaga iyo Kenya ay wax ka soo bixi waayeen, isla markaana wada hadalada socday wax meel la isla dhigi waayay, taasna ay qasab noqoto inay Maxkamad u gidbiyaan dacwad.
“Anaga wada hadal ayaa sameynay, wada hadalkaas waxay nagula muuqataa inaan daneyneynay, Nairobi baa Aamina dhowr jeer ku shirnay, wada hadalada waxay leeyihiin meel laga bilaabo iyo meel lagu socdo, anaga xariiqa ama calaamada ay Kenya sameysay wax noo cuntamaya ma aheyn, hadii bani’aadamka is qabto meel lagu kala baxa jira, Maxkamadna waa ku qasbanaanay”ayuu yiri C/raxmaan Ducaale Beyle.
Mr Beyle ayaa sheegay in labada dal ay yihiin deris, isla markaana hadii arrinta ay isku hayaan ku kala bixi waayeen inay Maxkamad noqoneyso, taasna ay tahay meesha lagu kala bixi doono, hase yeeshee waxaa uu cadeeyay in dhankooda wali diyaar u yihiin wada hadalka.
“Ma kala guureyno waa wada deganahay labo dal oo deris ah ayaanu nahay, aniga iyo aamino in badan ayaa ka wada hadalnay, diyaar baan u nahay wada hadalka ha socdo, meel walba diyaar ugu nahay New York iyo meel kastaba, laakiin waxaa marka hore muhiim ah in shirkadaha faraha badan ee maalin walba jooga Badda in laga saaro”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Debadda Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan kulan su’aalo lagu weydiinayey ka sheegay in Soomaaliya si rasmi ah u dacweysay dowladda Kenya oo sheegatay qeyb ka mid ah badda Soomaaliya, islamarkaana geysay shirkado ka sameeya sahan shidaal.